Iholide yosapho ngasemlanjeni
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMarc Et Véro
ILa Cardabelle, indlu yamatye, amagumbi amabini okulala, ngasemlanjeni, entliziyweni yeBrousse-le-Château, enye yezona dolophana zihle kakhulu eFransi eMzantsi Aveyron phakathi kweMillau, Albi kunye neRodez.
Kwiholide yephupha kumazantsi eAveyron
Ilungele ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngephenyane, ukujonga iilali ezintle kakhulu e-Aveyron, ukutyelela iiseli zaseRoquefort, ukuphonononga i-cathedral kunye nedolophu yakudala yase-Albi kunye nemiwonyo engenakubaleka yaseTarn.
Indlu enomtsalane kubantu aba-4 ngasemlanjeni kwilali edwelisiweyo
Ukuzola, indlu yamatye yenkulungwane ye-17, yabantu aba-4. Umbono uphefumla phezu komlambo ongezantsi, intlambo kunye nenqaba ephakathi, ekhanyiswe kakuhle ebusuku. Ukuhlamba ngesandi esithambileyo somlambo, unokuphumla ngokupheleleyo kwi-terrace enkulu.
Embindini welali yaseBrousse-le-Château, ebekwe phakathi 'kweyona dolophana intle eFransi', elunxwemeni lweTarn, iyure enye ukusuka kwibhulorho yaseMillau okanye kwiCathedral yaseAlbi. Kuyinto yiparadesi kubathandi imbali kunye namatye amakhulu, ngokuba beentaba, abahambi ke, ababambisi beentlanzi, kunye Alrance ophuma emazantsi endlu kunye Tarn, iingangamsha, ezigudle ilali. Ngelo inqaba, abantwana baya kukwazi ukufumana indawo omlingo ezele imbali aphe weentaka 2 kufuphi nomlambo, isiseko iphenyane imizuzu embalwa endlwini (Broquiès) iya kukuvumela ukuba ufumane i kummandla phezu komlambo. Emanzini.
Indlu inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala, ikhitshi eline-dishwasher kunye nomatshini wokuhlamba, igumbi lokuhlambela, kwaye ngaphezu kwayo yonke i-terrace enkulu evaliweyo ejongene nomlambo kunye nefenitshala yegadi, i-deckchairs kunye ne-barbecue.
Umbono ucacile kwaye utshintsho lwendawo luqinisekisiwe.
Ukufikelela kwindlu nge-calade apho siye safaka amanyathelo ambalwa ukwenzela ukuba kube lula ukufikelela, nangona ukufikelela kuyo yonke into akukhuthazwa kwaye kunzima kubantu abanokunyakaza okucuthiweyo okanye abanobunzima bokunyuka izitebhisi.
Elalini, sicebisa indawo yokutyela "Le Relays du Chasteau" apho uya kutyela khona iincasa zakho kunye nezinto ezikhethekileyo zengingqi.
Ukunyuka okuningana kushiya ngokuthe ngqo ukusuka kwidolophana, kuyamangalisa, sizibhale kwincwadi encinci yeendwendwe zethu.
Ungaphoswa kokufunyanwa izisele Roquefort, ukutyelelwa Albi Cathedral kunye kwidolophu endala, i Millau ibhulorho kunye kwemiwonyo Tarn ngu ngephenyane, kodwa kokufunyanwa 11 ezininzi iilali ezintle eFransi e Aveyron kuquka Brousse nguye gem.
I-BROUSSE LE CHÂTEAU YI-IDAU YOMLANDO, EMPHEPHENI WE-TARN NE-MEDIEVAL CASTLE UKUHAMBA NGOKUQHELEKILEYO.
KUFUTSHANE: II-CELARS OF ROQUEFORT, 10 EZINYE IIlali EZIHLULEKILEYO, I-CELARS OF ROQUEFORT, I-PONT DE MILLAU KUNYE NE-CATHEDRAL KA-ALBI KUTSHANJE zidweliswe NJENGElifa lelifa lehlabathi yi-UNESCO.
Umbuki zindwendwe ngu- Marc Et Véro
Ukuba unqwenela, siya kukuxelela ngezona ndawo zethu ziyimfihlo eAveyron :)
Inombolo yomthetho: 0000
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brousse-le-Château